Momba anay - Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.
Shijiazhuang Mets Machinery Co., Ltd.(izay antsoina hoe Mets Machines) dia orinasa iraisam-pirenena manokana amin'ny famokarana sy ny serivisy paompy slurry. Ny biraon'ny foibe dia miorina amin'ny faritra fampandrosoana teknolojia avo lenta, Shijiazhuang City, Hebei Prov.,. Mets Machines no mitantana Hebei Hanchang Minerals Co., Ltd. ary ireo orinasan-tserasera iraisam-pirenena maro.
Mets Machinary dia natsangana tamin'ny taona 2008, ny orinasa dia mihevitra hatrany ny kalitaon'ny vokatra, ny fikarohana ary ny fampandrosoana ho toy ny làlan'aina. 30% no mpamorona teknika amin'ireo mpiasa sinoa sy vahiny efa ho 100 ao amin'ilay orinasa. Mets Machines dia nandany vola mihoatra ny 120 tapitrisa yuan tamin'ny haitao, ny fisafoana ny kalitao ary ny fanatsarana ny fomba famokarana tao anatin'ny 10 taona lasa izay miantoka ny kalitaon'ny vokatra eto amin'izao tontolo izao.
Ny iraka ampanaovina anay dia ny ho lasa manam-pahaizana momba ny kojakoja an'ny mpanjifanay. Manaraka ny fitsipika mifantoka amin'ny mpanjifa foana izahay. Nanangana trano fanatobiana entana sy ivon-toeran-dehibe amin'ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany izahay, nitondra ny fivarotana entana hatrany amin'ny toerana lalindalina kokoa.
Ankoatr'izay, ny milina Mets dia manangana mavitrika ny trano fitehirizan-tsakafo feno indrindra sy ny ekipa serivisy aorian'ny varotra matihanina. Ankehitriny dia napetraka ny trano fanatobiana entana sy atrikasa any Perth, Aostralia ary Laos any atsimo atsinanan'i Asia. Ivotoerana serivisy aorian'ny varotra any Moyen Orient, ny tanànan'ny fanjakana mahaleo tena, Amerika atsimo ary afrika afovoany dia kasaina hatao ary atsangana tsikelikely.
Izahay dia manizingizina amin'ny fanomezana kojakoja azo antoka sy avo lenta ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana fohy indrindra.
Asa fitoriana an'ny orinasa
Ny tanjon'i Metslurry dia ny "HATONGA AN'ILAY FIARAHAM-BOKIN'NY FIARAHAN-TRANO SY ASA".
Mets natokana hanomezana tahiry fitaovana fitrandrahana avo lenta sy serivisy OEM ho an'ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Izahay dia manizingizina amin'ny fanomezana vokatra farany azo antoka azo antoka amin'ny mpampiasa amin'ny fotoana fohy indrindra.
Ny orinasanay mifikitra amin'ny foto-kevi-pitantanana "mifototra amin'ny olona", mandrindra endrika isan-karazany ny hetsika fialam-boly, manatsara ny fitaizan-tena ara-batana, manatsara ny fiainan'ny mpiasa, manao izay ezaka rehetra ahafahan'ny mpiasa ao amin'ilay orinasa mahita ny fahatsapana "trano" .
Ny orinasanay dia manaraka hatrany ny filozofia "fanavaozana, mahay mandanjalanja, mahomby, matihanina" miaraka amin'ny "vokatra avo lenta", "" vidiny mifaninana "sy" amin'ny fandefasana fotoana "hamaly ireo filana matihanina amin'ny sehatra maro. an'ny mpanjifa samihafa.
Tamin'ny fiandohan'ny nananganana azy dia namolavola ny paikadim-pampandrosoana fikarohana tsy miankina sy ny fampandrosoana ary ny famoronana marika nasionaly.
Ny fanoloran-tena sy ny fikirizana dia ahafahantsika manangona teknolojia sy traikefa ary mametraka ny fototry ny fampandrosoana.
Ny fanitarana ny ambaratongam-pamokarana dia satria isika manaraka hatrany ny fenitra manara-penitra avo lenta.
Manatsara ny fitaovana, ny haitao ary ny rafitra fitantanana hifanaraka amin'ny fanitarana ny ambaratonga.
Manitatra ny orinasa, manampy fitaovana fanaraha-maso isa, ary manatsara ny refy sy ny kalitaony.
Fahombiazana mitohy amin'ny fampiharana vaovao, mamorona lanja ho an'ny mpanjifa, ary mandroso amin'ny ho avy matihanina kokoa.